आईपिएलबाट बाहिरिए दिल्लीका कप्तान श्रेयस अय्यर, को बन्ला त टिमकाे नयाँ कप्तान ? « Sansar News
आईपिएलबाट बाहिरिए दिल्लीका कप्तान श्रेयस अय्यर, को बन्ला त टिमकाे नयाँ कप्तान ?
१३ चैत्र २०७७, शुक्रबार १५:२८
१३ चैत, काठमाडौँ । २०२१ को आईपिएल अघि दिल्ली क्यापिट्ल्सको टिमलाई ठुलो झट्का लागेको छ । टिमका कप्तान श्रेयस अय्यर चोटको कारणले गर्दा आईपिएलबाट बाहिरिएका छन । उनी भारत र इंल्याण्ड बिचको पहिलो एकदिवसीयमा फिल्डीङ्ग गर्ने क्रममा चोटिल हुन पुगेका थिए । चोटिल भएका श्रेयस अय्यर त्यस पछि मैदानबाटै बाहिरिनु परेको थियो । उनले इंल्याण्ड विरुद्धको एकदिवसीय खेलबाट पनि गुमाउने छन । बिसीसीआईका अनुसार उनी चोट मुक्त हुन कम्तिमा पनि ३ देखि ४ महिना लाग्ने बताएकाे छ ।
उनकाे कप्तानीमा दिल्ली क्यापिटल्स गत सिजनमा पहिलो पटक आईपिएलकाे फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो । श्रेयस अय्यरले दिल्लीका लागि आईपिएलमा ४१ खेलमा कप्तानी गरेका थिए जसमा दिल्लीले २१ जित हासिल गरेकाे थियो भने १८ खेलमा हारको सामना गरेको थियो ।
दिल्लीकाे नयाँ कप्तान स्टिवन स्मिथ बन्ने सक्ने सम्भावना निकै उच्च रहेकाे छ । दिल्लीले अक्सनमा अष्ट्रेलियाका स्टिवन स्मिथलाई टिममा अनुबन्धित गरेको थियाे । स्टिवन स्मिथ राजिस्थान रोयल्सका कप्तान समेत रहेका थिए । आईपिएलको राम्रो गर्ने अनुभव भएका स्टिवन स्मिथले ४३ खेलमा टिमको कप्तानी गरेका छन । उनको कप्तानीमा २५ पटक टिम विजयी भएको छ भने १७ पटक पराजित भएको छ ।
टिमको नयाँ कप्तान बन्न सक्ने खेलाडीमा ओपनर शिखर धवन, अजिंक्य राहणे र युवा खेलाडी रिषभ पंत पनि रहेको छन । शिखर धवनले सनराईजर्स हैदरावादको १० खेलमा कप्तानी गरेका थिए जसमा टिम ४ खेलमा मात्र विजयी भएको थियाे र ६ खेलमा पराजित भएको थियाे । त्यसैगरी अजिंक्य राहणेले पनि आईपिएलमा २५ खेलमा कप्तानी गर्दा ९ खेलमा मात्र टिमले जित हासिल गरेको छ । दिल्लीले युवा खेलाडी रिषभ पंतलाई पनि कप्तानीको जिम्मेवारी दिन सक्ने छ । पंतले अहिलेसम्म आईपिएलमा कप्तानी भने गरेका छैनन् ।
महिला क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता
खेल क्षेत्रलाई उद्यमका रुपमा अगाडि बढाउन राज्यले प्राथमिकता…
एसीसी महिला टी–ट्वान्टी : नेपाल हङकङसँग पराजित
एसीसी महिला टी–ट्वान्टी च्याम्पियनसिपमा नेपाल हङकङसँग पराजित
एसिसी महिला टी–ट्वान्टी क्रिकेट : बहराइनलाई हराउँदै सेमिफाइनलमा…